Liven: Capture na soro ndị niile bịara ihe omume na mmemme gị ọzọ | Martech Zone
Sunday, December 31, 2017 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
Mgbe ị bụ ọkà okwu, otu n'ime nsogbu ndị kachasị na ị nwere bụ ịmata onye bịara nnọkọ gị ka ị nwee ike isochi ma emesịa. Maka ndị bịara ya, ọ na-abụkarị nkụda mmụọ na ịnweghị ike iso yana ngosi mpaghara. Ndị na-ekwu okwu na-enyekarị adreesị ozi-e ebe ndị bịara ya nwere ike izipu ha ozi ma rịọ oche slide ahụ. Nsogbu ya bụ na ọ naghị egbu oge. Ndị bịara ya, chefuo adreesị ozi-e, ma ị nweghị ike ijikọ ma emechaa nzukọ ahụ.
Ndụ bụ ihe na-egbukepụ egbukepụ weebụ nke na-agbanwe ihe a niile.
Ndị bịara Tinye Usoro Omume
Lee Agenda Nzukọ
Lelee Ngosipụta ahụ ma soro Onye Ọkà Okwu Okwu
N’oge na-adịghị anya, eji m n’ọrụ n’elu ihe omume m mere na mpaghara. Ihe omume ahụ bụ n'efu ma meghee ọha na eze, mana ọ dị mkpa na m ga-enweta ozi kọntaktị nke ndị bịaranụ ka m wee nwee ike ijikọta ha maka ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu. Ọzọkwa, anyị nwere oghere Q & A na-emeghe na ihe omume ahụ, anyị chọrọ ịnye ụzọ dị mfe maka ndị bịara ịjụ ajụjụ.
na Ndụ, anyị nyere anyị burukwa na Powerpoint ngosi. Liven hazie koodu mmemme ma bipụta slide anyị. Kachasị mma, anyị enweghị ike ịgba ọsọ Keynote ma ọ bụ PowerPoint; naanị anyị gosipụtara nnukwu ihe nchọgharị ihuenyo na mmemme ngosi. Dị ka onye na-eweta ihe, anyị nwere ike ịkwalite slide anyị na mpaghara mgbe anyị abanyela n'elu ikpo okwu… niile na ịntanetị. Ọ rụrụ ọrụ na-enweghị ntụpọ. Dị ka ọkà okwu, a gwara anyị na ibe anyị mgbe a jụrụ ajụjụ! Ikpo okwu ahụ na-enyekwa nyocha nyocha maka ndị bịara ya.
Site na idebe ya ngwa weebụ mkpanaka, enweghị nbudata ma ọ bụ ọgba aghara ọ bụla - Achọrọ m ka onye ọ bụla wepụ ekwentị ha, mepee ihe nchọgharị na Liven.io, ma tinye koodu mmemme ha. Ọ dịghị onye nwere nsogbu ịdenye na ịmalite mmemme ahụ. Nke kachasị, anyị hapụrụ ozi ahụ na ozi kọntaktị nke onye ọ bụla bịaranụ. Ugbu a, mgbe anyị na-ahazi ihe omume anyị ọzọ, anyị nwere ndepụta email anyị iji zipu ncheta kwa!
Liven bụ mmalite na nchoputa, Mike Young, na-kụziri site ịrịba otu at Obodo Mmepụta. Ha na-agbanwe ngwa ngwa na mgbanwe na itinye n'ọrụ ọhụụ kwa ọnwa. Nwere ike ịmepụta ihe omume mbụ gị ugbu a ma were ikpo okwu maka nyocha ule! Ọ bụrụ n'ịchọrọ igosipụta ikpo okwu ugbu a, tinye koodu NSB.
Mepụta ndụ gị Liven
Tags: ndị bịarajide ndebanyeogbako ngwaọrụomumeihe omumendebanye aha mmemmeakara ngosi ekwentị mkpanaakaihe ngosi ekwentingwa weebụ ngwa ngwa